सेक्सका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी ८ आसनहरु – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक ३०, शनिबार १६:४८
टिप्स:- यौन मानव जीवनको एक अभिन्न र निक्कै महत्वपूर्ण पाटो हो । दाम्पत्य जीवनमा यौनिक सन्तुष्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यौनका विषयमा बात्सायन देखि आधुनिक मनोबैज्ञानिकहरुले विभिन्न पुस्तक लेखेका छन् ।
यहाँ यौन संसर्गलाई आनन्ददायी बनाउने केही प्रभावकारी र सरल आसनहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. केटी केटाको काखमाः
केटा कुर्सीमा बस्ने र खुट्टामुनि सिरानी राख्ने । अनि केटाको काखमा बस्ने । केटीले आफ्ना खुट्टा केटाको काँधमा राख्दा केटा नजिक हुन पाउँछ । यसपछि केटाले यौन क्रिडा शुरु गर्न सक्छ । यो आसन चरमोत्कर्षका लागि निक्कै प्रभावकारी मानिएको छ ।
२. किचन टेवल आसनः
यो आसन ओच्छ्यानमा भन्दा अन्यत्र टेवल वा किचन टेवलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो आसनमा केटी टेवलमा सुत्ने र खुट्टा केटाको काँधमा राख्ने अनि केटाले यौन क्रिडा शुरु गर्ने । यो पनि चरम सन्तुष्टी पाउने अर्को तरिका हो । यद्यपी यो आसनका लागि केटा केटीले नुहाएको र सफा रहेको हुनु पर्छ ।
३. कमल आसनः
यो आसनलाई सबै भन्दा बढी पसिना आउने र निकट सेक्स आसन पनि भनिन्छ । यसमा केटी केटाको काखमा बस्छे र उसकै अनुहारमा हेर्छे । केटा र केटीको फर्किने दिशा एउटै हुन्छ । एक अर्कालाई अठ्याएर गरिने यौन क्रिडामा पनि चरमोत्कर्ष छिटो अनुभव हुने बताइन्छ ।
४. पुल आसनः
यो आसनमा केटा घुडा भुँइमा छुने गरि बस्छ । केटी ९० डिग्रीको कोण पर्ने गरी केटा तिर फर्केर हातले टेक्छे । अनि विस्तारै केटाले यौन क्रिडा शुरु गर्दा चरमोत्कर्ष अनुभव हुन धेरै समय लाग्दैन ।
५. सिँडी आसनः
यो सिँडी आसन सिँडीमा गरिन्छ । यो आसनमा केटीले उपल्लो सिँडीमा घुँडा टेक्छे भने केटाले माथिल्लोमा घुँडा टेक्छ । त्यसपछि यौन क्रिडा गर्दा आनन्दको स्तर नै फरक पर्छ ।
६. समथर आसनः
यो आसनमा केटी कुनै समथर ठाउँमा बस्छे र खुट्टा केटाको काँधमा राख्छे । केटीले केटाको घाटीमा हातले बेर्छे अनि केटाले यौन क्रिडा थाल्छ । यो आसनमा चरमोत्कर्ष अनुभव गर्न धेरै बेर लाग्दैन ।
७. पुतली आसनः
यो पुतली आसनमा केटी ओच्छ्यानको छेउँ वा कुनै टेवलको छेउँमा सुत्छे जहाँबाट खुट्टा तल झुण्ड्याउन मिल्छ । केटो घुडा टेकेर केटीको जिउँमा प्रवेश गर्छ । यो आसनमा पनि केटीले खुट्टा केटाको काँधमा राख्छे । यो पनि चरमोत्कर्षमा पुग्ने सहज विधी हो ।
८. सिरानी आसनः
यो आसनमा केटी सामान्य तरिकाले सुत्छे र उसको कम्मर मुनी सिरानी राखिन्छ । अलिकति उठेको महिलाको तल्लो भागलाई समेट्दै पुरुषले माथीबाट यौन क्रिडा शुरु गर्छ । यो आसनमा केटीको भंगाकुरमा केटाको प्रहार नजिकबाट पर्ने हुँदा निक्कै आनन्दादायी हुन्छ ।